Sacuudiga oo doonaya in uu heshiis la galo Xuutiyiinta Yemen, qorshena soo bandhigay – Calanka.com
Sacuudiga oo doonaya in uu heshiis la galo Xuutiyiinta Yemen, qorshena soo bandhigay
in Dibedda — March 23, 2021
Sacuudi Arabiya ayaa soo jeediyay qorshe nabadeed cusub oo lagu soo afjarayo ku dhowaad lix sano oo dagaal ka socday Yemen.Waxay soo jeedineyaan xabad joojin ay Qaramada Midoobay kormeerto oo u dhaxeysa dowladda Yemen ee Sucuudigu taageero iyo fallaagada Xuutiyiinta, oo ay taageerto Iran.
Qorshaha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in dib loo furo isku xidhkii muhiimka ahaa ee cirka iyo badda, iyo bilowga wadahadallada siyaasadeed.Fallaagada Xuutiyiinta ayaa sheegay in dalabku uusan u muuqan inuu meel fog gaadhayo si looga qaado xayiraadda hawada iyo badda ee saaran.
Soo jeedinta waxaa caasimada Sucuudiga ee Riyaad kaga dhawaaqay Wasiirka Arimaha Dibada Sacuudiga Amiir Faysal bin Farxaan oo ugu yeedhayey Xuutiyiinta, kuwaas oo gacanta ku haya dhul balaaran oo Yemen ah in ay ka aqbalaan.Waxa uu sheegay in xabad joojinta ay dhaqan galayso isla marka ay Xuutiyiintu aqbalaan.
Dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa soo dhaweysay dalabkan, laakiin Xuutiyiinta ayaa sheegay in dadaalkaasi uusan wax cusub soo kordhinin, isla markaana ay ka gaabiyeen dalabkoodii ahaa in gabi ahaanba laga qaado xayiraada saaran garoonka diyaaradaha ee caasimada Sanca, iyo dekedda galbeed ee Xudeyda.
“Waxaan fileynay in Sacuudi Carabiya ay ku dhawaaqi doonto dhamaadka xayiraadda dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iyo qorshe lagu ogolaanayo 14 markab oo ay hayaan isbaheysigaasi,” madaxa wadahadalada Xuutiyiinta Mohammed Abdulsalam ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters.
Kooxdu waxay sii wadi doontaa inay kala hadasho Sacuudiga, Mareykanka iyo dhexdhexaadiyahooda oo Cummaan ah heshiis nabadeed, ayuu yiri.
Saraakiisha Sucuudiga waxay sheegeen inay talaabooyinkooda kala kaashanayaan Qaramada Midoobay iyo Maraykanka, kuwaas oo sidoo kale dardar galiyay dedaalkooda ku aaddan joojinta khilaaf kaas, oo abuuray dhibaatada bini’aadanimo ee ugu xun adduunka.Maalmo ka hor, Xuutiyiinta ayaa diiday qorshe Mareykanku uu ku doonayay xabad joojin dalka oo dhan ka dhacda.